Wax -soo -saarka iyo Warshadda Hoos -u -Dhigista Shiinaha ee Grooved | Zhihua
Qalabyada jeexjeexa ayaa u oggolaanaya isu -soo -bax deg -deg ah iyo wax -ka -beddelidda nidaamyada dhuumaha waaweyn maxaa yeelay waxay bixiyaan xasillooni aad u weyn oo ay weheliyaan fidno ballaaran. Waxay sidoo kale aad qaali u yihiin rakibidda, dayactirka, iyo dib-u-socodka. Meel jeexjeexan, guryaha isku -dhafan ayaa isbarbar socda barxadda suunka; tani waxay siisaa tallaabo ciriiri ah oo ay weheliso dib -u -dhigid, taasoo siineysa isku -dheelitirnaan dheeri ah. Qalabyada jeexjeexa ayaa sidoo kale kaa caawinaya inaad ku xirato tuubooyinka xaaladaha ay boosku aad u sarreeyo.
Qalabyada la jeexjeexay waxay leeyihiin saddex qaybood oo waaweyn: jeexjeexyo si ay u waafajiyaan tuubooyinka, boolal si loo xidho isku -xidhka, iyo cadaadiska jaakadaha wax -qabad ee jawaabta leh si looga hortago daadadku. Grooves oo ku yaal dhammaadka tuubooyinka waxay u sahlaysaa inay isku xirmaan oo gooyaan. Qalabyada la jeexjeexay waxay badbaadin karaan shirkaddaada waqti iyo lacag maxaa yeelay uma baahna alxanka, dabagalka, ama dunta.
Shirkadaha ku jira macdanta, ilaalinta dabka, HVAC, daaweynta biyaha wasakhda ah, iyo qaybaha warshadda korontada ayaa inta badan adeegsada tuubooyin iyo isku -xireyaal leh qalabyo jeexan. Si ka duwan nidaamyada caadiga ah ee shaabaduhu cadaadiska ku dhaqmaan, gaasaska wax lagu xirayo waxay cadaadis ku abuuraan bannaanka tuubooyinka, taasoo kor u qaadeysa xasiloonida qallajinta jeexjeexan. Sababtoo ah nabadgelyada dheeraadka ah ee kala -goysyada jeexjeexan, ayaa xitaa loo adeegsadaa nidaamyada milateri iyo kuwa badda. Noocyada C-shaabadood oo caag ah oo saddex-laab ah ayaa ka dhigaya daadinta wax aan macquul ahayn!
Xirfadaha la jeexjeexay waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan sida “yaraynta”, “dabacsan”, ama “adag”. Qalabyada la jeexjeexay waxaa laga yaabaa inay ka muuqdaan daboollo, raadiyo gaagaaban, koofiyado dhammaad leh (ama “dabool dhammaad-dhan”), qaabab-shaati (ama “dhejisyo iskutallaab ah”), farsamooyin farsamo, hoos-u-dhigeyaal, iyo xusullo. Koofiyadaha dhammaadka ah ee loo qoondeeyay waxaa loogu talagalay inay ahaadaan kuwo dhammaad-ka-ku-habboon oo ku habboon. Waxaa loo adeegsadaa dhibcaha, sprigs, cabbiraadaha, bulaacadaha, iyo madaxa rusheeyaha. Farsamooyinka farsamada ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto xarumo farac ah adigoon ku xirnayn ama isticmaalin qalabyo badan.
• Si Degdeg ah Isugu Urursada
• Way fududahay in dib loo maro Nidaamyada
4) Ku -habboonaanta qalloocan uma baahna:
5) Faa'iidooyinka ku habboonaanta jeexjeexa:
• Naqshadaynta cusub waxay awood u siineysaa rakibidda fudud, degdeg ah oo jaban, iyada oo aan loo baahnayn qalab gaar ah ama tababar.
• Shir degdeg ah adiga oo isticmaalaya khadka alaabta isku xira midda gaarka ah.
• Kayd aad u badan waqti iyo lacag labadaba taas oo ka dhalatay baabi'inta baahida loo qabo alxanka iyo dunta.
• In la yareeyo buuqa iyo gudbinta gariirka isla markaana la suurtogeliyo isku-xirnaanta is-xakamaynta.
• Dabacsanaanta qaabaynta khadadka xaaladaha adag.
• Wax khatar ah ma laha qulqulka sababtuna waa isbeddelada heerkulka ama dhaqdhaqaaqyada ka dhasha ruxruxa ama ruxa.
• Waxay awood u siisaa adeegsiga tuubooyinka dhuuban ee darbiga leh, iyadoo hoos u dhigaysa miisaanka iyo qiimaha labadaba.
• Ilaalinta Dabka
• Daaweynta Biyaha Qashinka
• Dhirta Awooda
L mm Shahaado
Hore: Hoos -u -dhicii Mareegaha ee La Fiirshay
Xiga: Flange adabtarada
Isku -dhaf adag
Laanqayrta Dhimista Jeexa